Spotify anopindura zvakare kuna Apple mune chichemo chayo chepamutemo | Ndinobva mac
Francisco Fernandez | | Apple Music, Noticias
Sezvaungangodaro uchitoziva, mazuva mashoma apfuura kubva kuSpotify yakasarudza kuisa chichemo chepamutemo neEuropean Commission pamusoro peAppleChokwadi ndechekuti ivo havasi kuita kuti zvive nyore zvachose kuti sevhisi iyi irambe ichikura, kunyanya nekuda kwemitemo yakatemerwa kune vanogadzira neApp Store uye kukwikwidzana kunokonzerwa neApple Music.
Nezuro, takaona mhinduro yepamutemo kubva kuApple. kubva kuSpotify timu ivo vafunga kupindura zvakare, zvichiratidza kuti zvavari kuita ndezvoga.
Aya ndiwo maitiro akaita Spotify kumhinduro yaApple kuchichemo chayo chepamutemo
Sezvo isu takakwanisa kuziva nekuda kweruzivo rwe Kusiyana-siyanaZvinotaridza kuti Spotify ichangobva kupindura kunyunyuto dzakadai zvekare zvichitevera mhinduro yekutanga kubva kuna Apple. Zvinotyisa kuziva kuti vanoratidza sei kuti vanga vachitotarisira mhinduro yakadaro kubva kwavari, uye sekuburitsa kwavakaita, "Chero monopolist anozopa zano rekuti hapana kana chakaipa chaakatadza opokana kuti ane hanya nezvakanakira vakwikwidzi nevatengi".
Nenzira iyi, Spotify ingadai yakafunga kuramba ichirwira kuchengetedza kodzero dzayo sekambani uye nekupa masevhisi akanakisa kune vashandisi vezvigadzirwa zveApple. Tinokusiira mhinduro yakazara yakadudzirwa pazasi:
“Chero munhu akazvimiririra acharatidza kuti hapana kana chakaipa chaakaita uye anozviti ane hanya nezvinodiwa nevanokwikwidza nevatengi. Nekudaro, mhinduro yaApple kuchichemo chedu kuEuropean Commission haisi itsva uye inosangana nezvatinotarisira zvakakwana.
Isu tinopa chichemo chedu nekuti zviito zvaApple zvinokuvadza makwikwi nevatengi, uye kutyora kuri pachena kwemutemo. Izvi zvinoonekwa mukutenda kwaApple kuti vashandisi veSpotify paIOS vatengi veApple uye kwete vatengi veSpotify, inoenda pamwoyo wedambudziko neApple. Parizvino takamirira hurongwa hunofanirwa kuitwa neEuropean Commission kuti iite ongororo yayo. '
Nenzira iyi, sezvaungave uchifungidzira, Zvinotaridza kuti hondo ichaenderera mberi kwenguva yakati rebei, nekuti izvi zvinotora nguva yakarebaKunyangwe chiri chokwadi kuti zvinokwanisika kuti European Commission haichipe kukosha kwakanyanya uye kuti vanoirega ichipfuura. Tichaona zvishoma nezvishoma kuti zvese izvi zvinoshanduka sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Spotify inopindura zvakare kuApple nezve maitiro ayo pane chichemo chakapihwa
Keynote Yakasimbiswa, WWDC Yakasimbiswa, uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac